နားလည်မှု့ပြုယူရန် ကြွက်နို့ဘာကြောင့်ဖြစ်သနည်း ? - intouchmedicare
နားလည်မှု့ပြုယူရန် ကြွက်နို့ဘာကြောင့်ဖြစ်သနည်း ?
Last updated: 2022-03-25 | 751 ကြည့်ရှုခြင်း |
အရေပြားပေါ်တွင်ဖြစ်သောရောဂါအချို့သည် အန္တရာယ်အများအပြားမရှိသော်လည်း ၄င်းသည်ယုံကြည်မှု့အားထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။(သို့)အကယ်၍ပစ်ထားပါကကုသရခက်သည်အထိ ပျံ့နှံ့နိုင်ပါသည်။အားလုံးထဲမှတစ်မျိုးမှာ ကြွက်နို့ဖြစ်ပြီး အမည်ကြားရုံနှင့်မည်သူမှမဖြစ်ချင်ကြပါ။ ကြွက်နို့ဘာကြောင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ကြွက်နို့ကုသပုံအမျိုးမျိုး ဥပမာ ကြွက်နို့အားမီးတို့၍ကုသခြင်း၊ကြွက်နို့အားခွဲစိတ်ခြင်းသည် မည်သို့သောသူများနှင့်သင့်တော်ပါသလဲ။
ကြွက်နို့ရောဂါ (Warts) သည် Human Papillomavirus (HPV) ကြောင့်ဖြစ်ပွားသော ကူးစက်တတ်သောရောဂါအုပ်စုအတွင်းမှ အရေပြားရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။အရေပြားဆဲလ်များအားထူစေပြီးမာကျောရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။အရေပြားတွင် အရေကြည်ဖုများဖြစ်စေပြီး မည်သည့်အသက်အရွယ်တွင်မဆို ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။အချို့တွင် လက္ခဏာမပြပဲကိုယ်ခန္ဓာ၏စိုစွတ်သောနေရာများတွင်ကြီးထွားနိုင်သည်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု့ကြောင့်(သို့) လိင်ဆက်ဆံခြင်းအပါအ၀င် ပစ္စည်းများအားမျှ၀ေသုံးခြင်းကြောင့်လည်းကူးစက်နိုင်ပါသည်။ပြင်းထန်သောအန္တရာယ်အများအပြားမရှိသော်လည်း ၄င်းသည်ယုံကြည်မှု့အားထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲအခြားရောဂါများလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ကြွက်နို့ရောဂါခွဲထွက်သွားပုံ2နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါသည်။၄င်းတို့မှာ အရေပြားပေါ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောကြွက်နို့များဖြစ်သည့် ဥပမာ အရေပြားပေါ်ရှိကြွက်နို့၊လက်ဖ၀ါး၊ခြေဖ၀ါး၊လိင်အင်္ဂါ၌ဖြစ်တတ်သောကြွက်နို့များဟူ၍နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ (သို့) ရွဲကျလာသောအသားပိုအားခေါ်ပါသည်။၄င်းသည် အမျိုးသမီးသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသောကြောင့်ဤအခြေအနေမျိုးသည် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပြီး စနစ်တစ်ကျမှန်ကန်စွာကုသမှု့အားခံယူသင့်ပါသည်။ အကယ်၍ပစ်ထားခဲ့လျှင်အဆုံး၌အသက်ဆုံးရှုံးသည်အထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အကြာခဏတွေ့ရသောကြွက်နို့လက္ခဏာများမှာ အရေပြားပေါ်၌ရှည်၍ဖောင်းထွက်လာသော 10 မီလီမီတာ ခန့်အရွယ်အစားရှိကြွက်နို့ ၄င်းသည်အသားအရေပေါ်တွင်လည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးအရေပြားနှင့်တူညီသောအရောင်(သို့)လက်ဖ၀ါး၊ခြေဖ၀ါး၊မျက်နှာ၊လည်ပင်းစသောအုပ်စု လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း၌ဖြစ်တတ်သောကြွက်နို့(သို့)ရွဲကျလာသောအသားပိုမျိုးအား အများအားဖြင့်လိင်အင်္ဂါ၌ဖြစစ်ခြင်းကိုတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ ပေါင်ကြား(သို့)စအို၌တွေ့ရပြီး အသားပိုအဖုကြီးပါက နောက်ပိုင်းတွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
ကြွက်နို့ဖယ်ရှားခြင်းအစိတ်အပိုင်အားရောဂါအမျိုးအစားနှင့်လူနာ၏လိုအပ်ချက်အလိုက်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ဥပမာ ဆေးလိမ်းခြင်း၊ကြွက်နို့အားအပူဖြင့်တို့ခြင်း၊ကြွက်နို့အားခွဲစိတ်ခြင်း၊လျှပ်စစ်ဖြင့်တို့ခြင်း၊ကြွက်နို့ကုသမှု့တစ်ခုစီ၏အသေးစိတ်အားကျွန်ုပ်တို့ လာကြည့်ကြပါစို့။
ယေဘုယျအားဖြင့်အား ပုံမှန်ကိုယ်ခံအားရှိသော လူနာ 65% ရာခိုင်နှုန်း၌ ဤရောဂါသည်အလိုလိုပျောက်နိုင်ပါသည်။ (သို့) ကြွက်နို့ဖြစ်ခြင်းနည်းပါက ဦးစွာမိမိဘာသာလိမ်းဆေးရှာလိမ်းခြင်းနည်းလမ်း အားရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကြွက်နို့ဖြစ်သောအသားပေါ်တွင်လိမ်းရပါမည်။နာကျင်မှု့မရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များနှင့်သင့်တော်ပါသည်။ ဆေးလိမ်းခြင်းကုသမှု့အားသုံးခဲ့သော် အချိန်ရက်သတ်အပတ်ပေါင်းများစွာကြာပါမည်ဖြစ်ပြီး (သို့) ဖြစ်များပါက ဆရာ၀န်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပြီ မိမိဘာသာဆေးလိမ်းခြင်းမပြုသင့်ပါ။
ဤနည်းလမ်းဖြင့်ကြွက်နို့ဖယ်ရှားခြင်းသည် အအေးဓာတ်သုံးပြီးနိုက်ထရိုဂျင်အရည်ဖြင့်တို့၍ကြွက်နို့ကုသခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကြွက်နို့ကုသနိုင်သောနည်းလမ်တစ်ခုးဖြစ်သော်လည်း ကြွက်နို့ဖယ်ရှားရန်အတွက် အကြိမ်များစွာပြုလုပ်ရပါမည်။ လက်ချောင်းများပေါ်တွင်ကြွက်နို့ရှိသောလူနာများအားကုသရာတွင်သင့်တော်ပါသည်။ ကုသသောနေစဥ်အချိန်အတွင်း ကြွက်နို့တို့သောဧရိယာ၌ စပ်ခြင်း၊ယားခြင်းများခံစားမှု့ရှိနိုင်ပါသည်။ (သို့) အရည်ကြည်ဖုဒဏ်ရာရှိသော်လည်း သူ့အလိုလိုပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည်။
နောက်နည်းလမ်းတစ်နည်းမှာ Electrocoagulation လျှပ်စစ်မီးဖြင့်ကြွက်နို့အားတို့ခြင်း (သို့) ကြွက်နို့အမြစ်အား ထုတ်ယူခြင်းမပြုခင်ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်လေဆာ (Laser ablation) ဖြင့်တို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အားသာချက်မှာ ကုသမှု့တစ်ကြိမ်တည်း(သို့)အကြိမ်အနည်းငယ်နှင့်သာပြီးနိုင်သော်လည်း မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ၄င်းသည်အမာရွတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့် ကျွမ်းကျင်သောဆရာ၀န်နှင့်သာပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
လျှပ်စစ်မီးဖြင့်ကြွက်နို့အားတို့ခြင်း (သို့) နိုက်ထရိုဂျင်အရည်ဖြင့်တို့၍ကုသခြင်းသည် ကြွက်နို့ဖြစ်ခြင်းအားမကုသနိုင်ပါ။ကြွက်နို့ဖယ်ရှားရန်အတွက် ခွဲစိတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ဘေးကင်းမှု့နှင့်ကောင်းသောရလဒ်များရရန်အတွက် စံချိန်စံညွှန်းမှီသောဆေးရုံများရှိ အထူးကုဆရာ၀န်များနှင့်သာရွေးချယ်၍လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
အစပိုင်းတွင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ကြွက်နို့သည််ဆိုးရွားသောရောဂါမဟုတ်ပေမဲ့လည်း ပစ်မထားသင့်ပါ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခြားဆိုးကျိုးများဖြစ်သောယုံကြည်မှု့နှင့်ဆက်စပ်မှု့ရှိသောရောဂါများ အားထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကြွက်နို့ကုသခြင်းအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ကြွက်နို့အားတို့၍ကုသခြင်းနည်းလမ်း၊ဆေးလိမ်းခြင်း (သို့) ကြွက်နို့ခွဲစိတ်ခြင်းတို့နှင့်ပက်သက်၍ ဆရာ၀န်မှ သင့်တော်သလိုစစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မည်။စိတ်၀င်စားသူများအနေနှင့် အသေးစိတ်မေးမြန်းရန် (သို့) အိမ်အနီးရှိ Intouch Medicare ဆေးခန်းမည်သည့်ဌာနခွဲတွင်မဆိုစစ်ဆေးမှု့အားပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။မိမိနှင့်နီးသောဆေးခန်းဌာနခွဲအား Google တွင်ရှာခြင်းဖြင့် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ (Website) ၀က်ဆိုက်ရှိဆက်သွယ်ရန်လမ်းကြောင်းများမှလည်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
จี้หูด รักษาหูด กำจัดหูด ผ่าตัดหูด จี้ไฟฟ้า ใกล้ฉัน အပူတို့၍ကြွက်နို့ကုခြင်း ကြွက်နို့ကုသခြင်း ကြွက်နို့ဖယ်ရှားခြင်း ကြွက်နို့ခွဲစိတ်ခြင်း လျှပ်စစ်မီးတို့ခြင်း သင်နှင့်နီးသော